All out of Love ( 2018 ) - Myanmar Asian TV
Ma Tian Yu ရယ် Sun Yi ရယ် Wallace Chung ရယ် သုံးယောက် ပုံဖော်ထားတဲ့ သုံးပွင့်ဆိုင် အချစ်ဇာတ်လမ်း Drama လေး ဖြစ်ပါတယ်
တရုတ်ပြည်မှာ တစ်အား Hot နေတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲလေး ဖြစ်ပြီး
Viki မှာဆိုရင် Rating 8.3 အထိ ရောက်နေတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲလေးဖြစ်ပါတယ်….
၁၉၉၇ ခုနှစ်က ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ မိုင်းတွင်း ပေါက်ကွဲမှုကနေပြီးတော့
ကျင်ရှန်း(Sun Yi ) ရဲ့ အဖေ က အသက်ဘေးက လွတ်မြှောက်ခဲ့ပါတယ်…
ဒါပေမယ့် သူ့အဖေ အသက်ဘေးက လွတ်မြှောက်သွားပေမယ့်လဲ လက်တစ်ဖက်နဲ့ ခြေထောက် ဆုံးရှုံးသွားခဲ့ပါတယ်….
အဲ့နောက်မှာ သူ့အဖေ အသက်ကို ကယ်တင်တဲ့သူက ဘယ်သူဆိုတာ မသိပဲနဲ့ ဆေးရုံမှာ လန်ရှန်း ( Ma Tianyu) ဆိုတဲ့ ကလေး တစ်ယောက်က ဘေးမှာ ရှိနေခဲ့လို့
ကျင်ရှန်း ( Sun Yi ) တို့ မိသားစုက မွေးစားခဲ့ပါတယ်…
တစ်ရွာလုံးကတော့ ကျင်ရှန်း အဖေရဲ့ မယားငယ်သား ထင်မှတ်ထားကြပါတယ်…
လန်ရှန်း ( Ma Tianyu ) ကတော့ သူ့ညီမ စောင့်ရှောက်ခဲ့သလို သူ့ညီမလေးတစ်ယောက်ထဲသာ စိတ်ထဲ ထည့်ထားတက်တဲ့ အစ်ကို တစ်ယောက်အနေနဲ့
တကယ်တန်း မောင်နှမ ဟုတ် မဟုတ် သိသွားတဲ့ အခါမှာ တော့ ဘယ်လိုတွေ ဆက်ဖြစ်လာမယ်….
ကျင်ရှန်း ( Sun Yi ) ကကော သူ့အစ်ကို နဲ့ Wallace Chung ( ချန်ထျန်ယို ) နဲ့ ဘယ်သူကို ရွေးချယ်သွားမယ်…
Main actor အဖြစ် သရုပ်ဆောင်ထားတာတော့ Wallace Chung ဖြစ်ပြီး တကယ်တန်း အချစ်ကို ခံစားပြသွားတာတော့ လန်ရှန်း ( Ma Tianyu ) ဆိုတဲ့သူပါပဲ
လန်ရှန်း ( Ma Tianyu ) အချစ်ကို ဘယ်လို သရုပ်ဆောင်ပြသွားမလဲဆိုတာ မြင်တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်…
အရမ်း Hot တဲ့ ဇာတ်လမ်းလေး ဖြစ်လို့ ခံစားကြည့်ပါအုံး ခင်ဗျာ….
Translator : Min Theim Kyaw ( Translate In Heart ) & Su Mon Thet
File Size : 350 MB – 450 MB
TV Status: Drama
Starring: Alan Yu, Ma Tianyu, Sun Yi, Wallace Chung,